Musharaxa Madaxweynaha DGPL, Colaad Maxamed Siciid, oo ka jawaabaya eedaymo ay u soo jeediyeen masuuliyiinta Gobolka Nugaal iyo kuwa Puntland.
Colaad Maxamed Siciid oo ah nin ganacasade ah oo Reer Puntland ah, ayaa ku tilmaamay wax lagu carqaladaynayo musharaxnimadisa eedaymo ay u soo jeediyeen Maamulka Gobolka Nugaal iyo Puntland.
Colaad Maxamed Siciid oo lagu eedeeyey in uu amni-xumo ka wado gaar ahaan Gobolka Nugaal, guud ahaana Puntland ayaa wuxuu ku tilmaamay eedaymahaas mid sumcadiisa shaqsiyadeed iyo musharaxnimadiisa carqalad lagu gelinayo, isagoo ku tilmaamay kuwa shacabka dhegaha ugu ridaya beenta ku tiri ku teen ah, in ay yihiin shaqsiyaad gaar ah oo uusan magacyadooda shaacin.
Colaad waxaa uu sheegay in ay dhekafaar ku noqotay ka dib markuu maqlay wararka sheegaya in uu ku eedaysan yahay Amaan-daro, wuxuuna sheegay in uu yahay nin ganacsade ah sumcad fiican ku dhexleh bulshada Puntland isaga oo arintaas sharaxaad ka bixinayana waxa uu yiri"
"Anigu waxaan ahay nin ganacsade ah, oo aan dadka iyo dalka toona wax dembi ah ka gelin, ciddii soo bandhigaysa dembi aan galayna waxaan jeclaan lahaa in ay u soo bandhigaan dadka shacabka ah ee aan isugu soo sharaxay in aan ku hago hab cadaalad iyo horumar ah, runtiina waxa maanta laygu eedaynayo ee ah amni-xumo aan waligay intaan ku noolaa Puntland laygu eedayn ayaa cadaynaysa in ay rabaan shaqsiyaad in musharaxnimadayda lagu carqaladeeyo, balse, waxaan shacabka u sheegayaa in aniga mar kasta ay iga go'an tahay musharaxnimadaydu oo aanan hadal shaqsiyadeed u joojinayn.
Waana lagu yaqaan dadka qaarkiis xasdiga ah hebel ama reer hebel ku xumee.
Colaad Maxamed Siciid ayaa waxaa maamulka Gobolka Nugaal iyo kan Puntland ba ku eedayeen in uu ku jiro arrimo amni-xumo oo uu ka wado gudaha Gobolka Nugaal, isagoo lagu eedeeyey in uu ka dameeyey wax uu ku tilmaamay Carqald Gelinta musharaxnimadiisa.
Si kastaba ha ahaatee, Mudane. Colaad Maxamed Siciid oo hadda ka horna saxaafada wareysi siiyey ku saabsan wax-qabadkiisa hadduu ku guulaysto musharaxnimadiisa M.weynaha DGPL ayaa cadeyey in uusan marna ka niyad jabayn musharaxnimadiisa madaxweynaha Puntland ee xilliga soo socda.
Madaxweynihii hore ee DGPL ayaa ahaa C/laahi Yuusuf Axmed, kii labaadna wuxuu ahaa Mudane. Maxamed Cabdi Xaashi oo isagu xilka hayey muddo 4 bilood ah,madaxweynaha DGPL ee xilka haya iminka ayaa ah Maxamuud Muuse Xirsi (Gen. Cadde Muuse) oo la doortay isaga iyo ku xoggeenkiisa Afqurac Jan, 8, 2005.
Inkastoo doorashada M.weynaha DGPl aan wali la gaarin haddana waxaa arrintaas isku khilaafsan dadweynaha oo ilaashanaya xilliga iyo maamulka oo aanba ogeyn.
Waxaa dadku leeyihiin waxaa u haray maamulka 6 bilood oo saddexdii sanno ka dhiman balse maamulku wuxuu rumaysan yahay in xilligiisu ahaa 4 sanno.
Ilaa hadda waxaa xilka Madaxweynaha DGPL isu soo taagay Colaad Maxamed Siciid oo ah nin ganacsade ah, iyo Xisbiga Ramaas Puntland Political Party oo iyana aad isu diyaarinaya, waxaa isna la hadal hayaa in uu sharaxan yahay Xasan Abshir Faarax balse afkiisa lagama hayo wax cadaynaya musharaxnimadiisa.